Ukulungiswa kweplastiki yomzimba womntu
Ukuhlinzwa okwangoku kwiplastiki, akukho nto engenakwenzeka. Iingcali ezinamava ziyakwazi ukuguqula impumlo enkulu ebusweni obuhle obuhle, i-lored-yered iya kuthatha indawo ibe neendlebe ezintle, kwaye kumama okhulile uya kwenza intombazana. Ukulungiswa kweplastiki yomzimba womntu uye wathandwa kakhulu kuwo wonke umhlaba.
Emva kweminyaka engama-35, imeko yesikhumba, izicubu ezithambileyo zobuso kunye nentamo yenguqu, kwaye kungabi ngcono. Ngenxa yokuba ulusu lulahlekelwa yi-turgor, oko kukuthi, ithoni yeselula, iimpawu zokuqala zokuguga zivela. Emva kweminyaka emi-5 ukuya kwe-10 ebusweni, iinkozo ze-nasolabial zichazwe ngokucacileyo, iingxenyana zangaphandle zamehlo kunye neelishi ziyancipha. Abo bafumana ubunzima obunzima, kukho "iimbini eziphindwe kabini", ngokuphawulekayo xa zihlawula intloko. Akukho nto enokuyenza, ixesha livakalelwa. Ukusebenzisa ixesha akungabi ngenyameko, sebenzisa indlela evuselelayo yokuvuselela - ukuphakamisa ubuso. Ukulungiswa kweplastiki yintsebenziswano yangempela, ngoko ke yenziwa phantsi kwe-anesthesia jikelele. Udokotela ogqirha "udonsa" inxalenye yesikhashana, ephantsi nephakathi. Kukho ukulungiswa kobuso obunqamle kunye nentambo yentamo. Ukuba kuyimfuneko, sebenzisa iipilisi zeplastiki (eziza kuwela kwi-eyelashes ubudala) kunye ne-liposuction elula kwindawo yesibini. Izibonda zokuphakamisa ubuso ziphantse zingabonakali, kuba umgca womgca ufihliwe kwisikratshi, kwaye umgca wesibini uqala phambi kwendlebe uze uphele emva kwendlebe.
Emva kwebheksi yesetyhula, umfazi ubheka iminyaka engama-10 ukuya kwe-20 emncinane. Abo banobuso obunobumba obunobumba obunobunzima obunokuthi buchaza i-cheekbones kunye nekhanda elincinci, umphumo uvame ukuba ngcono kunabo abo ubuso babo bunqabile. Impembelelo yokuphakanyiswa ubuso igcinwa iminyaka eyi-10 ukuya kwe-15. Ukulungiswa kweplastiki, ngendlela, kungekuphela kuphela ukuphelisa imichilo yokuguga, kodwa kuphelisa ukuba kwenzeke kwakhona. Ixesha elifanelekileyo xa kulungile ukugqiba isigqibo kwisetyhula esikhatywayo malunga neminyaka engama-45 ukuya kwe-50. Ngeli xesha, utshintsho lwamaxesha sele luyabonakala, kodwa imibimbi ayengakaphenduli ibe yimigxobhozo enqamlekileyo, enzima ukujamelana nayo ngokuhlinzwa.
Umsebenzi uqhubeka ukusuka kwisiqingatha esinye kunye nesiqingatha ukuya kwiiyure ezintathu, kuxhomekeke kwinkimbinkimbi. Ingenelelo yokuphanda iphethwe phantsi kwe-anesthesia jikelele, isigulane ngeli xesha lilele ngokulala, lingabi nento. Emva kokugqitywa kokuphakanyiswa, isigulane sichitha iintsuku ezimbini -3 esibhedlele. Kwicatshulwa emva kokusebenza kwiklinikhi inika isiguli ngeoli ekhethekileyo ngesiseko se-heparin, eya kwenza ukuba kunokwenzeka ukuba ukukhangela kungabonakali ngaphezu kwexesha. Ngomhla we-8 unokuhlamba intloko yakho, kwaye emva kweentsuku eziyi-10 ukuya kwe-12 ususe izibonda. Emva kweeveki ezimbini ukuya kwethathu, i-edema yokusebenza kunye nokunyunyuzwa kuncitshiswa kakhulu, kwaye unako ukuphuma usebenzisa izimonyo. Abantu abasondeleyo abanokungazi malunga nokusebenza oye wadlulisela. Ukubuyiswa kokugqibela kwezicubu kwenzeka emva kweenyanga ezintathu ukuya ezintandathu. I nkcukacha ngalabo bathetha isigqibo malunga nokuphakamisa ubuso:
- Awuyi kusebenziswa xa ufumana izifo ezinzulu zezitho zangaphakathi, ezifana nentliziyo, izintso, isibindi kwimeko enzima.
- Abantu abanempilo, umsebenzi ukhuselekile.
- Kukho iimeko xa amabhinqa azenza malunga neesibhozo ezithandathu. Nangona kunjalo, oogqirha abangaphezu kwezi zibini abacebisi ukuqhuba, kuba emva kokuba isithathu sibheke ubuso buba yimaski-njengokwesikhashana. Nangona kunjalo, ngomnyaka ubonakaliso buso bubuyiselwa.
Umsebenzi obizwa ngokuthi "i-blepharoplasty" (ukuchithwa kwesikhumba esingaphezulu kweelusiki) kwenziwa ngokuzimeleyo kwaye ngaphezu kokujongana nokuphakanyiswa. Ukuba "amehlo amnandi" athatyiswa ngamakhulu eminyaka axhomeke kwi-eyelashes, okanye i-fatty hernias, oko kukuthi, iingxowa phantsi kwamehlo, i-blepharoplasty iya kunceda ukujamelana nale ngxaki kanye kanye. Umgca wokubambisa ngokuqhelekileyo uhamba ngokuhamba kwenkophelo ephezulu kunye nomda osezantsi wezantsi ngaphantsi kwee-eyelashes. Iimpawu ezihamba phambili ziphantse zingabonakali.
Ukulungiswa kweplastiki kumntu kwenziwa phantsi kwe-anesthhesia engenayo okanye ngaphantsi kwe-anesthesia yendawo. Kuhlala iyure nesiqingatha kuxhomekeke kwinkimbinkimbi. I-Sutures isuswa emva kweentsuku ezimbini okanye ezimbini. Emva koko enye iveki isiguli siya kufuneka sigqoke "iimboti" ezikhethekileyo kwamehlo akhe ukulungisa imigca yezigqibo. Ngosuku lweshumi, unokumisela izimonyo. Zonke izikhumba ziya kubuyiselwa kwiiveki ezintandathu. Iingcali zincoma i-blepharoplasty emva kweminyaka engama-30. Ukuba unesi sifo esingaphakathi, akukho mbuzo wokuhlinzwa.
UKUPHATHWA KWE-PLASTIC UKUBHALWA KWE-NOSE.
Ukuba impumlo yakho ayifanelekanga kwaye le meko yenza ubomi bakho bunzima kakhulu, wamukeleke kwi-rhinoplasty - umsebenzi wokutshintsha isimo sempumlo. Inkqubo yokuhlinzwa iquka ukuguqulwa kwesicatshulwa se-bone-cartilaginous sempumlo okanye iindawo zayo ezihlukeneyo ukwenzela ukuba ubuso bubonakale bubukeka kunye nobuhle. Akukho mda umda we-rhinoplasty. Kodwa kulungile ukuqhuba ukufikelela kwiminyaka engama-30. Impumlo yakhiwo esincomekayo. Ukongezelela ukuhlobisa ubuso, eli lungu lenza umsebenzi wokuphefumula nokuphosa. Ngoko ke, kwiimeko ezininzi, i-rhinoplasty iyinkqubo enzima. Ukuba kukho i-ENT pathology kwimpumlo, inxalenye yokuqala yenziwa yi-ENT, kwaye okwesibini - ngu-operesenti yeplastiki. Ubungakanani bomsebenzi ukususela kwiyure ukuya kubini. Ngokuqhelekileyo idlula ngaphantsi kwe-anesthesia yendawo. Kodwa ukuba ukwesaba nantoni na, nangona utywala olungenabuhlungu, u-anesthesia jikelele unokwenzeka.
Emva kwe-rhinoplasty, kuya kufuneka ugube iplate yokulungisa ekhaleni lakho iintsuku ezintlanu. I-Edema kunye ne-intradermal hemorrhage (ukutyumla) kwezinye iimeko kunokuqhubeka iiveki ezintathu. Iimpembelelo zokusala kwe-edema yokupasa ekupheleni kwenyanga yesibini. Ukuba isigulane sisebenzisa iiglasi, akakwazi ukuzigqoka kwinyanga kunye nesiqingatha emva kokusebenza. Ubume obufunayo bempumlo kuza kuthatha iinyanga ezintandathu, okanye nangonyaka. Kuze kube ngeli xesha, ukuqina kwesikhumba kwisiphelo sempumlo kunye nokukhukhuza okuncinci kwabanye, kodwa kubonakale kwimeko yesigulane, kunokuqhubeka. Emva kokuhlinzwa, enye inqabana encinci ngesimo seLatini V ihlala kwi-septum yangasese. Ukuqhuba i-rhinoplasty, kukho ukuchasene-ezi ziphi izifo zamalungu angaphakathi kwifom enzima. Kwikliniki, isigulane sibheka uviwo olupheleleyo lwezobugqirha kwaye siya kwindlela efanayo. Abagqirha bakholelwa ukuba:
- Impumlo kufuneka isebenze xa kukho into ekususa kuyo okanye apho ufanele ubenze ukubunjwa kwimilo emitsha, umzekelo, ukuba umntu unempumlo enkulu, isalathisi esiphezulu sempumlo, igobile ngenxa yengozi yangemva.
- Ukuba unomphunga we-snub ekhaleni, kwaye yonke impilo yakho iphupha encinci kunye ngqo, njengoMichelle Pfeiffer, uya kudana. Ugqirha akayi kuyenza loo nto, kuba ungekho iiphene ezinzulu kwimpumlo yakho, kwaye lo mnqweno ugxininiswa kuphela ngqalelo.
- Ukuba le nxalenye yobuso bakho ikhulu kakhulu ngokwemvelo, kwaye kunye ne-hump, inokuthi, mhlawumbi, iguqulelwe ibe yincinci.
UCWANGCISO LWENKQUBO YOKWENZA
Kwathi kwenzeka ukuba esikolweni izilwanyana ezinomsila zaba yinto ekuthandwayo ngayo. Enyanisweni, ekukhuleni, akukho mntu entloko uya kudlala inkohliso kwindoda eneendlebe ezikhukhulayo. Nangona kunjalo, eli fowuni liza kuba neenkathazo ezininzi. Umzekelo, kufuneka ugubuze iinwele zonke. Kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukwenza i-haircut short haircut! Kukho indlela yokuphuma. I-Otoplasty iyakwazi ukulungisa nayiphi na iqondo le-lop-ears. Umsebenzi ungenziwa ukususela kwiminyaka esixhenxe. Ihlala kwiyure enye ukuya kwisiqingatha phantsi kwe-anesthetic yendawo ephephile. Emva kwe-otoplasty kukho inqamlezo ebusweni obungasemva kwe-auricle, eya kuba yinto engabonakaliyo.
Ixesha lokuvuselela lincinci. 7-10 emva kweentsuku emva kokuhlinzwa, umntu unxibe i-bandage ekhethiweyo entloko. Kwezinye iimeko, le bhanki iyanconywa ukuba igqitywe kwezinye iiveki ezimbalwa. Ukuhlamba intloko kwiiveki ezimbini emva kokusebenza kungavunyelwe, kwaye emva koko iinyanga ezimbini akunakwenzeka ukuba zibandakanye iintlobo ezinkulu zezemidlalo. Ukuchasana kufana nokunye okusebenzayo-izifo zezitho zangaphakathi.
Ekugqibeleni, ku funeka kuqatshelwe ukuba ukulungiswa kweplastiki yomzimba womntu kufuneka kusetyenziswe kuphela xa ezinye, iindlela ezingakumbi zokunciphisa zingabancedi. Ukususela kwizakhono zonyango, ininzi yesiphumo sokugqibela ixhomekeke. Ngoko ke, ukuba unqumle ukutshintsha ukubonakala kwakho ngale ndlela, musa ukuvila ukufumana ingcali efanelekileyo. Iziphakamiso zabahlobo ziya kukunceda kulo mbandela.
Facelift nge hyaluronic acid
Iimonki ze-Toning zesikhumba esomileyo
Ukuphumelela kwimibuzo yabantu
Ziyolise ngo-Ephreli 1 kubahlobo kunye nabafunda nabo esikolweni, oogxa emsebenzini kunye nabazali ekhaya
Phamba nge pike
Izinto eziphathekayo eziphathekayo eziphathekayo: iimfashini zendlela, ekwindla-ebusika 2015-2016
I-cottage cheese pancakes ngaphandle komgubo
Amaphiko enkukhu asePeruvia